मेयर लालकिशोर अहिले मौजमस्तीमा लागेका छन्ः मनोज साह, नगर सभापति नेपाली कांग्रेस – doodhmati || dudhmati
Home / news / मेयर लालकिशोर अहिले मौजमस्तीमा लागेका छन्ः मनोज साह, नगर सभापति नेपाली कांग्रेस
Sujeet Jha September 4, 2018	news, समाचार 923 Views
प्र. जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले बढाएको कर विरुद्धको आन्दोलन कहाँसम्म पुगेको छ ?
नगर प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि लिएर प्रत्येक वडा कार्यालयमा दुई दिन धर्ना कार्यक्रम गरिसकेका छौँ । जनतालाई परेशान गर्ने कार्य नगरपालिकाले गरेको कुरो आमजनमा हामी बुझाई सकेकाछौँ । अब जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा धर्ना लगायत अन्य बिरोधका कार्यक्रमहरु गर्ने छौँ । यसका लागि मंगलबार हामीले एउटा बैठक पनि राखेका छौँ । सोही बैठकले आन्दोलनका अन्य कार्यक्रमहरु अगाडी बढाउने छौँ ।
प्र. तपाईहरुको धर्नामा खासै भीड भएन भनिन्छ ?
हामीले भीड प्रदर्शन होइन हामी समस्या आमजनमा बुझाउने प्रयास गरेका छौँ । हाम्रो ज्ञापन पत्रपछि राजपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मेयरहरुलाई बोलाएर कर नलगाउन निर्देशन दिएका छन् । राहतको ठाउँमा आहत नगर्न भन्नु भएको छ । महन्थ ठाकुरभन्दा मेयर लालकिशोर ठूलो हुनु हुन्छ भने केही छैन नत्र तत्काल बढाइएको कर फिर्ता लिनु पर्छ ।
लालकिशोरजी अहिले मौजमस्तीमा लागेका छन् । जनताले यत्रो मत दिएर जिताएपछि उहाँ माथि नै देख्न थाल्नु भएको छ । यत्रो कर बढाउनुको पछाडी पनि उहाँको दम्भ नै हो ।
प्र. पार्टीले निर्देशन दिदा पनि जनकपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर लालकिशोर साह किन कर फिर्ता लिई रह्नु भएको छैन तपाईलाई के लाग्छ ?
लालकिशोरजी अहिले मौजमस्तीमा लागेका छन् । जनताले यत्रो मत दिएर जिताएपछि उहाँ माथि नै देख्न थाल्नु भएको छ । यत्रो कर बढाउनुको पछाडी पनि उहाँको दम्भ नै हो । जनकपुरधामका जनता परेशान छन्, समस्यामा छन् जताततै घर भत्काइएको छ, सडकमा जग्गा लिइएको छ तर सम्पति करमा कुनै छुट दिइएको छैन ।
मेयर भएको एक वर्ष हुन लाग्दा पनि लालकिशोर केही गर्न सकेका छैनन् । कहाँबाट पैसा आउँछ त्यही दाउमा लागेका हुन्छन् ।
प्र. नगरमा भईरहेको सडक र नाला निर्माणको सम्बन्धमा तपाई के भन्नु हुन्छ ?
सडक र नालाको निर्माणको गति एकदमै सुस्तगतिको रहेको छ, गुणस्तरहिन काम भईरहेको छ । जनकपुरधाममा चाडपर्वको समय आई सकेको छ तर पनि मूल सडकहरुको निर्माण हुन सकेको छैन । राजपाका ठूला नेता राजु चौधरी, सुदर्शन सिंह विद्यापति चोकमा हुँदा पनि सो चोकलाई कुरुप बनाइएको छ । जानकी मन्दिरसम्म जाने बाटो छैन । मेयर भएको एक वर्ष हुन लाग्दा पनि लालकिशोर केही गर्न सकेका छैनन् । कहाँबाट पैसा आउँछ त्यही दाउमा लागेका हुन्छन् ।
कर बढाइएको छ, लालकिशोरजीलाई त्यसले फरक पर्दैन तर राजपाकै आम कार्यकर्तालाई निक्कै असर परेको छ । कर कांग्रेसका लागि मात्रै होइन सबै जनताका लागि बढेको छ । सबै जनता परेशान छन् ।
प्र. तपाईहरु पनि दवाब दिन सकि रह्नु भएको छैन नि ?
हामी जनकपुरधाम बजार बन्द गरेर दवाब दिन चाहँदैनौँ । शान्तिपूर्ण रुपमै समस्या समाधान गर्न प्रयासमा लागेका छौँ । कर बढाइएको छ, लालकिशोरजीलाई त्यसले फरक पर्दैन तर राजपाकै आम कार्यकर्तालाई निक्कै असर परेको छ । कर कांग्रेसका लागि मात्रै होइन सबै जनताका लागि बढेको छ । सबै जनता परेशान छन् ।
Tags जनकपुरधाम नेपाली कांग्रेस मनोज साह महन्थ ठाकुर
Previous अख्तियारको टोलीद्वारा धनुषाको लक्ष्मिनिया गाउँपालिकामा छापा, नापी कार्यालयका जन्जिरदार पक्राउ
Next अपना जे फाइदा भेल ताहिमे मेयर लालकिशोर लागल रहैत छथिः धीरेन्द्र बहादुर सिंह, सचिव राष्ट्रिय जनता पार्टी, धनुषा
माघ २४ गत्ते,सर्लाही । हरिवनस्थित इन्दुशंकर चिनी उद्योगले किसानलाई यो सिजनमा क्रसिङ गरिएको उखुको भुक्तानी …